Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.1 Sava lalana
Amin'ny vanim-potoanan'ny vanim-potoana, ny fanangonana angona momba ny fitondran-tena-izay manao izay, ary rehefa-lafo, ary noho izany dia tsy dia fahita firy. Ankehitriny, amin'ny vanim-potoana nomerika, ny fitondrantenan'ny olona an'arivony dia voarakitra, voatahiry ary mandinika. Ohatra, isaky ny mividy ny tranonkala ianao, miantsoa amin'ny findainao, na mandoa vola amin'ny carte de crédit ianao, ny firaketana nomerika momba ny fitondrantenanao dia noforonina sy notahirizan'ny orinasa iray. Satria ireo karazana tahirin-kevitra ireo dia vokatry ny fihetsika andavanandro ataon'ny olona, ​​matetika izy ireo no antsoina hoe marika famantarana . Ankoatra ireo sasantsasany tantanin'ireo orinasa ireo, ny governemanta ihany koa dia manana angona mahavariana momba ny olona sy ny orinasa. Miara-miasa ireo rakitra sy raharaham-panjakana ireo matetika antsoina hoe angona lehibe .
Ny tondra-drano lehibe mitrandraka hatrany dia midika fa nifindra avy amin'ny tontolo iray izay nahitana ny fampahalalana mikasika ny fitondrantena ho an'ny tontolo iray izay be dia be. Ny dingana voalohany amin'ny fianarana amin'ny angona lehibe dia mahatsikaritra fa anisan'ny sokajy fampahalalana lehibe kokoa izay nampiasaina ho an'ny fikarohana ara-tsosialy nandritra ny taona maro: tahirin-kevitra momba ny angona . Ny antontam-baovao dia ny angona azo avy amin'ny fandinihana rafi-piarahamonina tsy misy dikany. Ny fomba mahery vaika handinihana izany dia ny angona fanadihadiana dia ny zavatra tsy midika hoe miresaka amin'ny olona (oh: fanadihadiana, lohahevitra ao amin'ny toko 3) na fanovana ny tontolo iainana (oh: fanandramana, lohahevitra ao amin'ny toko 4). Noho izany, ankoatra ny rakitra ara-barotra sy ny governemanta, ny angon-drakitra momba ny angon-drakitra dia ahitana ny zavatra toy ny lahatsoratra amin'ny gazety sy sary avy amin'ny zanabolana.
Ity toko ity dia misy fizarana telo. Voalohany, ao amin'ny fizarana 2.2, dia mamaritra loharanom-baovao lehibe aho amin'ny antsipirihany ary manatsara ny fahasamihafana fototra eo amin'izy ireo sy ny angona izay nampiasaina matetika ho an'ny fikarohana ara-tsosialy tany aloha. Avy eo, ao amin'ny fizarana 2.3, dia faritako karazana fahita iraisana amin'ny loharanom-baovao lehibe. Ny fahatakarana ireo toetra ireo dia ahafahanao mahatsapa haingana ny hery sy ny fahalemen'ny loharano efa misy ary hanampy anao hampiasa ireo loharano vaovao izay ho azo amin'ny ho avy. Farany, ao amin'ny fizarana 2.4, dia mamaritra teti-pikarohana telo lehibe izay azonao ampiasaina ny mianatra avy amin'ny angon-drakitra momba ny angon-drakitra: manisa zavatra, mialoha ny zavatra, ary manakaiky ny fanandramana.